नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बोक्सी लाएका मानिसहरुको बोक्सी झार्दै गरेका धामीहरु हुन् रे यिनिहरु !!!!
बोक्सी लाएका मानिसहरुको बोक्सी झार्दै गरेका धामीहरु हुन् रे यिनिहरु !!!!
यो तस्बिर पत्रकार बहिनी अनुराधा पौडेलको फेसबुक वालबाट साभार गरिएको हो । नेपालका सुदुर पश्चिमेली केही जिल्ला र ठाउँमा बोक्सी झार्ने भन्दै यस्ता आमानबिय कार्यहरु गरिन्छ भन्दा स्तब्धता छायो मनमा । यस्ता घ्रिणित कार्यलाई सबैले मिलेर अन्त्य गर्न लाग्ने होकी !
Posted by www.Nepalmother.com at 5:29 PM